स्थानीय तहले नचिनेका पर्यटकीय क्षेत्र ! « Drishti News – Nepalese News Portal
स्थानीय तहले नचिनेका पर्यटकीय क्षेत्र !
१२ माघ २०७७, सोमबार 10:22 am
इलाम, १२ माघ । कोरोनापछि पर्यटकीय क्षेत्र डाँवाडोल बन्यो । बन्दाबन्दीका कारण पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक पुग्न छाडे । पर्यटकको सत्कारका लागि खटिने पर्यटनकर्मी बेकामे बने । व्यापार चलाउन नसक्दा होटल घर बन्द हुने अवस्थामा पुगे । बन्दाबन्दीका कारण धेरै पर्यटनकर्मीको हातमुख जोड्ने माध्यम खोसियो ।
यस्तै सुटिङस्थलका रूपमा चर्चामा आएको पानीटारमा पनि पर्यटकको आइरो लाग्ने गरेको छ । ‘मिनी कन्याम’का रूपमा विकास भइरहेको पानीटारमा चर्चित म्युजिक भिडियो ‘तीन पाते’को सुटिङ क्षेत्र हो । आँखा नबिझाउञ्जेल हेरिरहुँ लाग्ने, केही अग्लो र केही होचो चियाबारीले जिल्लाभित्रका पर्यटकलाई बढी तानेको छ । म्युजिक भिडियोपछि ‘कृष्णलीला’ चलचित्र यो स्थानमा सुटिङ भयो । चलचित्रको सुटिङपश्चात् झनै पर्यटकको उपस्थिति बाक्लिएको स्थानीय पर्यटनकर्मीको भनाइ छ । चलचित्रका लागि यो ठाउँको दृश्य खिचियो तर सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेपछि चलचित्र नसकी नै सोही क्षेत्र चर्चा आएको हो । “हामीले चलचित्रबाट पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न यहाँ (पानीटार) आएका थियौँ तर, सामाजिक सञ्जालमा आएपछि पर्यटकको लर्के ताँत लाग्यो”, ‘कृष्णलीला’का निर्माता केवल तामाङले भने, “चलचित्र रिलिज हुनुअघि नै पानीटारमा पर्यटक पुग्न थाले, अब चलचित्रमा समेत देखिएपछि त झनै बढ्छन् ।”